AMISOM oo wacad ku martay inay xoojin doonto ammank konfurta Soomaaliya
AMISOM oo wacad ku martay inay xoojin doonto ammank konfurta Soomaaliya.
Ciidamada midawga afrika ee Soomaalia hawgalka kawada ayaa wacad ku maray in ay qaadi doonan qorshayaal lagu xoojinaayo amaanka konfurta wadanka Soomaaliya gaar ahaan wadada weyn ee isku xirta magalada caasimada muqdisho iyo konfurta wadanka kadib markii ay halkaasi ay ka dhaceen isku day lagu doonayi in lagu qaarijiyo wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Karim Xuseen Guuled.
Taliyaha ciidamaada amisom e Somalia janaraal naduru guti ayaa war uu kasoo saaray magaalada adisb ababa ee xarunta wadanka Ethiopia ku sheegay in ciidamadooda ay fashiliyeen weerar lagu qaday gari uu la socday wasiirka arimaha gudaha Somalia oo marayay konfurta wadanka.
Guuti ayaa yiri"weerarada noocani oo kale ah waxa ay naxusuusinayaan sida aysan u haboonayn in aanu u dareeno wax damqsho ah".
Waxa uu janaraalka shaca ka qaaday in ay sii wadi doonan dadaalada ay ku taaagerayaan dawlada Somalia iyo sidi wadanka looga ciribtiri lahaa Al-shabab isagoona tusaale u soo qaatay iskashiki ay sida wadajirka u sameyen AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya in ay sababtay in shabab ay isaga baxaan magaloyinka marka kismaayo iyo muqdisho.
Wasiirka arimaha gudaha xukuumada soomaaliya ayaa waqti hore ka badbaaday weerar dagaal oo ay Al-shabab ku qaadeen gaari uu la socday oo maraysay magalada marka ee gobolka shabeelaha hoose oo 110-km u jirta konfurta muqdisho casimada Somalia wax dhibaata ah kama soo garin wasiirka weerarkasi balse wararka qarkod ayaa tilaamamaya in rasas halkasi la isku weydaarsaday ay ku geriyoden